Tupu 2020 Citibank naanị chọrọ iri ume ọhụrụ | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Tupu 2020 Citibank naanị chọrọ iji ume ọhụrụ
Tomas Bigordà | | Ike imeghari ohuru
Citibank kwupụtara ụbọchị ole na ole gara aga, ihe mgbaru ọsọ ya nke ikpuchi 100% nke ike ya ike mmeghari ohuru na 2020, dịka akụkụ nke ntinye aka ya iji belata mmetụta gburugburu ebe obibi nke ọrụ ya.
“Anyị na-etinye aka n'iji ume ọhụrụ mee ihe iji gboo mkpa ike nke ọrụ anyị niile, ma na-aga n'ihu na-enye ego maka ọrụ metụtara arụmọrụ ume na ume dị ọcha maka ndị ahịa anyị, "Onye isi ụlọ ọrụ Citibank Michael Corbat kwuru.
3 Bank nke America
5 General moto
8 Courtlọ ikpe Bekee
Iji mee ngwangwa mgbanwe ike ma lekwasị anya na arụmọrụ dịka akụkụ "nkatọ" nke atụmatụ ya, Citi kọwara na ọ ga-atụle igbanye ọkụ eletrik 'na-na saịtị', mepụta nkwekọrịta ịzụta maka nnukwu ụlọ ọrụ na-enye ike, dị ka ebe data, na mgbakwunye na ojiji kwesịrị ekwesị nke kredit ike.
N'ụzọ dị otu a, ụlọ ọrụ ahụ gosipụtara na isi ụlọ ọrụ ụwa ọhụrụ ya na New York, ka na-ewu ewu, ka ahọrọla iji nweta akara LEED Platinum, ọkwa kachasị elu nke Green Building Council nke USA.
Na mgbakwunye, otu n'ime ụlọ ọrụ data ya dị na Texas, na-arụ ọrụ ugbu a na 50% na ume ọhụrụ, n'ihi nkwekọrịta ejiri Green-e banye, n'ụzọ dị otú a zere mgbanwe ọnụahịa, ebe ọ bụ na ha na-azụta ọkụ eletrik na nkwekọrịta nke afọ 15 ma ọ bụ 20.
Dabere na onye isi teknụzụ nke Citi Don Callahan "Site n'ilekwasị anya na ihe ọhụụ na arụmọrụ, anyị na-aga n'ihu na-ama onwe anyị aka iji melite akụrụngwa na arụmọrụ anyị gburugburu ụwa. N'otu ụzọ ahụ, ọ gosipụtara na Citibank na-achọ mmekorita ohuru iji zute "ebumnuche a dị oke mkpa."
Dabere na data sitere na ụlọ ọrụ ahụ, ebe ọ bụ na 2005 o jisiri ike mụbaa arụmọrụ ya site na 25%, belata ojiji mmiri site na 20%, tụgharịa 61% nke mkpofu, yana gbasaa pọtụfoliyo nke ezigbo ala na asambodo LEED ruo iri abụọ%.
Mana Citibank abụghị naanị ụlọ ọrụ na-amalite ịbanye na bandwagon na-agbanwe agbanwe, n'okpuru ebe anyị kpọrọ ụfọdụ n'ime ha
Jiri iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, na Apple TV gị duru ụwa nke ihe ọhụrụ. Companylọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ na mba 23 nwere 100% ume ọhụrụ. Na 2015, 93% nke ọkụ eletrik ya sitere na isi mmalite na Apple na-etinye aka rute 100%. Ọ na-enyere ndị ọrụ aka na-arụpụta aka belata akara ụkwụ carbon ha, na-arụ ọrụ aka iji wụnye ihe karịrị 4 gigawatts nke ike ọhụrụ dị ọcha n'ụwa niile site na 2020.
Ebumnuche nke ụlọ akụ North America a maka 2020 bụ iji 100% nke ike ọ na-eji emegharị emegharị. Iji mee nke a, ọ na-arụ ọrụ ugbu a na ntinye nke oghere ndị dị na mbara igwe ma na-eji Asambodo nke ume ọhụrụ (RECs) nke ikuku na ebe data dị na ọfịs ya na Texas.
“Anyị kwenyere na ịza mgbanwe mgbanwe ihu igwe ga-achọ mkpokọta mkpokọta. Anyị kwesịrị ịchịkọta akụrụngwa anyị ma chọta azịza ma jiri ohere azụmaahịa na-acha akwụkwọ ndụ karịa. Dịka akụkụ nke mbọ anyị na-abụ onye ndu itinye ego na ọcha ume"Anyị etinyela ego ruru $ 125,000 ijeri ego maka obere ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ na 2025," ka Alex Liftman, bụ onye isi ọrụ gburugburu ebe obibi nke ụwa, kwuru na saịtị RE100.
Companylọ ọrụ ihe ọ Theụ softụ dị nro nwere ihe mgbaru ọsọ siri ike: iji belata akara ụkwụ carbon na isi ọrụ ya (imepụta, nkesa na ngwa nju oyi) site na 50% site na 2020.
“Anyị na-aiming iji belata umu anwuru nile anyị uru yinye. Ojiji nke ọkụ eletrik nwere ike ịgbanye dị mkpa maka mgbanwe a na akụnụba carbon dị ala n'ọdịnihu, "ka Chris Childs, onye na-eduzi otu ụlọ ọrụ Energy na Climate Change Steering Group, dere na RE100.
Onye na-emepụta ụgbọala na-ezube igbo mkpa ọkụ eletrik niile nke ọrụ 350 na mba 59 nwere ume ọhụrụ na 2050. Ebumnuche a, yana ntinye maka ụgbọ ala eletrik, bụ akụkụ nke ụzọ ụlọ ọrụ ahụ si agakwuru mee ka azụmahịa gị sie ike, meziwanye obodo ma lebara mgbanwe ihu igwe anya, dị ka ụlọ ọrụ ahụ si kwuo.
Onye nwe M & M's, Snickers, na nri chọkọletị dị ka Whiskas na Pedigree, na-elekwasị anya n'ibelata ikuku carbon na arụ ọrụ nke aka ya ma jiri nwayọ na-abawanye ọkọnọ nke ume ọhụrụ na saịtị ya gburugburu ụwa, na ebumnuche na 100% nke ike ọ na-eji ga-abụ ihe efu na mmanụ ọkụ na 2040.
Nexus Ike ga-eweta ọkụ eletrik na-agbanwe agbanwe 100% na Bankia, na-eweta ngụkọta nke isi ihe 2.398, n'etiti ụlọ isi ụlọ ọrụ na alaka, na-eri kwa afọ karịrị 87 GWh. Nexus Energía gosipụtara otu n'ime onyinye kachasị asọmpi na ọkwa akụ na ụba na teknụzụ, ekele maka njikarịcha njigide na njikwa ngwaọrụ.
Akụkụ mkpebi bụ ọrụ njikarịcha nke emere maka isi ụlọ ọrụ Bankia na ngalaba niile, nke ga-apụta ihe dị mkpa ichekwa ego na ulo oba ego. Tụkwasị na nke ahụ, ụlọ ọrụ ọkụ eletrik mere nnyocha zuru ezu banyere isi iyi ọ bụla iji chọta ezigbo mkpa ya maka ike eletrik.
Courtlọ ikpe Bekee
El Corte Inglés belatara ya oriri eletrik n'oge 2016. ọnụ ọgụgụ a na-anọchi anya ọdịda nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 25% dabere na 2008.
Maka oke nkesa, ọ na-asụgharị n'ime njikwa njikwa ike dị ka otu n'ime isi ya usoro gburugburu ebe obibi. Ebumnuche ya bụ ebuli oriri eletrik ma dozie ọkụ, friji azụmahịa, usoro njikwa na ntụ oyi.
Otu n'ime usoro ndị a nakweere, otu ahụ akwalitewo atụmatụ ya iji dozie ọkụ nke ụlọ ahịa na mmejuputa nke Ikanam, na-anọchi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ìhè ọkụ 160.000.
Maka azụmaahịa azụmahịa, ụlọ ọrụ ahọrọla ịnọgide na-enye ibo ụzọ arịa ụlọ na ngwaahịa refrjiraeto na oyi kpọnwụrụ, na ebumnuche nke ime ka ha nwekwuo oru oma si ele ihe anya gbasiri ike.
CaixaBank enyerela aka bido osisi cogeneration biomass na Viñales (Chile), dị ka ụzọ isi wee belata ikuku CO₂ nke ewepụtara na ọrụ ya n'afọ gara aga. Na-agbakọ akara ụkwụ carbon gị ma kwado ọrụ ndị na-enye aka dozie ya Ọ bụ otu n'ime omume nke mezuru nkwa CaixaBank maka ichekwa gburugburu ebe obibi na ịlụ ọgụ maka mgbanwe ihu igwe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ike imeghari ohuru » Tupu 2020 Citibank naanị chọrọ iji ume ọhụrụ
Uru na ọghọm nke ike ikuku
Spain meziwanye ikuku ya na 2016